Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Caalamiga ee lagu Taageerayo Dadka la Jidh-dilay
Maalinta Caalamiga ee lagu Taageerayo Dadka la Jidh-dilay
26ka June waa maalinta Caalamka u aqoonsaday in la’is garab taago dadka soo maray dhibaatada Jidh-dilka (International Day in Support of Victims of Torture) iyadoo Qaramda Midoobay u aqoonsatay in lagaga hadlo arimahaa oo la is-garabtaago dadka la soo Jidh-dilay oo taageero loo fidiyo kuwa ka soo badbaaday dhibaatooyinkii loo gaystay, kuwii ku nafwaayayna lagu xasuusto.
2ba sababood ayaa loogu doortay 26ka June inay noqoto Maalinta Jidh-dilka Caalamka. Waxay ahayd 26kii June 1945 maalintii la saxiixay Cahdiga Qaramada Midoobay (United Nations Charter). Sidoo kale ayaa 26kii June 1987 waxaa dhaqan galay Cahdiga Qaramada Midoobay ee Xaaraan-timeynaya Jidh-dilka. Sidaa darteed ayaa 26ka June loogu aqoonsaday inay tahay Maalinta Caalamiga ay tahay in la xuso oo la’isgarab taago dadka la-jidh dilay.
Dalka Ogadenya waxaa ka socda xadgudub aad u baahsan oo ciidamada Itobiya ay si ula kac ah oo sharci qabta aanu jirin ku fulinayaan dadka shacabka ah. Xad-gudubyada iyo jidh-dilka ay ciidamada Itobiya iyo maleesiyaadka la socda ka wadaan dalka Ogadenya oo maalin walba dhaca ma’aha arin qarsoon. Itobiya waxay ka fulisaa jidh-dil ujeedada ay ka leedahay uu yahay in dadweynaha ay ku argagixiso oy ku cabsi galiso sidaa darteed falalkaa banai-aadminimada ka baxsan waxay u fulisaa hab aan qarsoodi ahayn oo ciidamadeeda iyo maxaysatada la socota ay amar siyaasi ah ka haystaan xukuumadda sare gaar ahaan raisal wasaaraha dalka Itobiya KT Meles Zinawi.
Jidh-dilka iyo xasuuqa ka socda dalka Ogadenya waxaa ka hadlay hay’ado badan oo caalamai ah sida HRW, Amnesty Intern., ARM, OHR iyo kuwa kaleba. Waxaa kaloo dhowr jeer lagaga hadlay Baarlamaanka Yurub. Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Odayaasha Congress-ka Mareykanka iyo Baarlamaanka Yurub ayaa si gaar ah uga hadlay tacadiyada ka socda Ogadenya. Waxayna sheegen in aanay noqon doonin arin la’isaga hadhayo, sababtoo ah dambiyada Jidh-dilka ma duugoobaan oo waqtigii ay suurtagal noqoto kuwa fulinaya iyo kuwa amarka bixiyay intaba waxaa la soo taagi karaa maxkamad caalami ah ama maxkamad umadda dambiga laga galay.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay ugu baaqaysaa dawladda Itobiya, inay dhawrto sharciga Xuquuqda Aadanaha ee dawlad ahaan ay u saxiixday. Inay joojiso ka aargoosiga shacabka taasoo ah fulaynimo ka baxsan sharafta askarinimo. Waxay uga digaysaa JWXO kuwa fal-dambiyeedkaa ku kacaya inay ogaadaan in lagula xisaabtami doono oo maalin ay noqotaba dambiyadaa ay ka galeen dadka shacabka ah lagu maxkamadayn doono.
Waxaan uga tacsiyaynaa munaasabadan ehelada dadkii ku dhintay jidh-dilka iyo xasuuqa bahalnimada ah ee ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Hawaarinta ay ka wadaan Ogadenya. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad dagdag ah siiyo dhaawaceena iyo naafadeena.
Waxaan horey u dhicin, hadana aan dhici doonin in lagu hakiyo halganka shacabka Ogadenya jidh-dilka iyo xasuuqa dadka shacabka ah een waxba galabsan lagu hayo. Guusha kama dambaysta ahna waxaa iska lahaa waligeedba Xaqlaha.
FG. Waxaan soo gudbin doonaa qoraal taxane ah aan kaga xogwaramayno tacadiyada ay maxayatada Hawaarinta ku hayaan dadka shacabka ah anagoo tusaalooyin u soo qaadan doonaa dhacdooyinka qaarkood.
Halkan Ka daawo dhibaatada loo gaystay shacabka S.Ogadenya
restoring data from Outlook to exchange says:
on this topic, it might not be a taboo matter but usually people don’t talk about such topics. To the next! Kind regards!!